Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » व्यवसायीको ठगी धन्दा: खसी भन्दै बाख्राको मासु बेच्दै
व्यवसायीको ठगी धन्दा: खसी भन्दै बाख्राको मासु बेच्दै
नारायणगढ, असोज २१ । भरतपुर महानगरले बजार अनुगमनमा तिब्रता दिएको छ । महानगरले हरेक दिन बजारका पसल तथा फर्महरुमा पुगेर नियमित अनुगमन गरी दोषी देखिएकोलाई कारबाही गर्ने गरेको छ ।
को रोनाको म हामारीले आममानिसको हातमुख जोर्न समेत असहज भइरहेको अवस्थामा बजारमा महँगी बढाएर उपभोक्तामाथि ठगी गर्ने गरेको धेरै गुनासो तथा उजुरीहरु आउन थालेपछि उपभोक्तामैत्री बजार बनाउन महानगरले नियमितरुपमा बजार अनुगमन गरी ब्यवसायीलाई खबरदारी गरिरहेको र कैफियत पाइएमा कसुरका आधारमा आवश्यक दण्ड, जरिवाना गर्ने गरिएको महानगरका अनुगमन अधिकारी कुँवर बताउँछन् ।
महानगरपालिकाको क्षेत्रभित्रका सबै ब्यवसायीहरुले महानगरको प्रचलित ऐन कानुन अनुसार दर्ता भएर ब्यवसाय गरेका छन् कि छैनन् ? तोकिए बमोजिमको सेवा दिएको छ कि छैन ? गुणस्तरमा कति ध्यान दिइएको छ भनेर आफूहरुले अनुगमनमा हेर्ने र कमी देखिएमा कारवाही गरिँदै आएको अनुगमन अधिकारी कुँवर बताउँछन् ।
ब्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउने, गुणस्तरमा ध्यान दिँदै उपभोक्तामैत्री बजार बनाउन आफूहरु खटिइरहेको कुँवरको भनाई छ । जालझेल, छलकपट नगरी इमानपूर्वक ब्यवसाय गर्न कुँवरले आग्रह गरे ।
अनुगमन टोलीले कमलनगरको तरकारी बजारमा जोडिएको आलम फिस सप्लाईलाई बन्द गराएको छ । यसले बिनादर्ता पसल सञ्चालन गरेको पाइएपछि बन्द गराइएको कुँवर बताउँछन् ।
पसल सञ्चालकलाई कागजातसहित महानगरमा आउन निर्देशन दिएको र उसको कसुर अनुसारको दण्ड, सजाय हुने उनको भनाई छ । आलमले फर्मालिन हालेको गुणस्तरहीन माछा बिक्री गर्ने गरेको गुनासो आएको उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्च चितवनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिष्णु भुषालले बताए ।
टोलीले त्यहाँ खुल्लारुपमा निकै फोहोरो स्थानमा बाख्रीको मासु बिक्री गर्ने गरेको भेटाएको थियो । त्यहाँ रहेका आधा दर्जन पसलले बाख्रीको मासु बिक्री गर्ने गरेको भेटिएको र सबै पसलेलाई आवश्यक कागजातसहित महानगरमा आउन भनिएको छ ।
उनीहरुले महानगरमा बाख्राको मासु पसल दर्ता गरेर बिक्री गरेको बताएका थिए । उनीहरुले दर्ताबिनै ब्यवसाय गरेको, कर नतिरी ब्यवसाय गरेको पाइए ब्यवसाय बन्द गरी आवश्यक कारबाही गरिने कुँवर बताउँछन् ।
अनुगमन टोलीले नारायणगढको आलु तथा प्याज मण्डीमा पनि अनुगमन गरेको थियो । केही दिनअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि अनुगमन गरी केही ब्यवसायीलाई जरिवाना लगाएको भएपनि त्यहाँका ब्यवसायीले अझै पनि ठगी गरिरहेको भेटिएको छ ।
टोलीले अनुगमन गर्दा अर्जुन शाहले सञ्चालन गरेको जय सन्तोषी माँ स्टोर्सले प्याजमा तौल घटाएर बिक्री गरेको भेटिएको हो । १८ केजी भनेर बिक्री गरेको प्याजमा १७ केजी ३०० ग्रामसम्म मात्रै तौल रहेको भेटिएको थियो ।